Faroole oo si la yaab leh uga deyriyay doorashada, si kululna u cambaareeyay madaxda Puntland – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faroole oo si la yaab leh uga deyriyay doorashada, si kululna u cambaareeyay madaxda Puntland
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole) oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa doorashada Soomaaliya ku tilmaamay mid musuq-maasuq iyo handadaad lagu maamulay islamarkaana wixii kasoo baxay aan la aqbali karin.
C/raxmaan Faroole oo haatan ka mid ah musharixiinta u tartameeysa doorashada xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa si buuxda u taageeray qoraalkii dhawaan kasoo baxay beesha caalamka oo dalabka loogu diray madaxda madasha qaran.
Wuxuu Faroole sheegay in doorashada dhawaan ka dhacday magaalooyinka maamul goboleedyadda dalka loo adeegsaday awood dowladeed, ay jiraan dad ku soo baxay caga-jugleyn, handadaad iyo laaluush, taasoo loo baahnaa in wax badan laga qabto.
Dhinaca kale, C/raxmaan Faroole ayaa madaxda maamulka Puntland ku eedeeyay inay degaanadooda ka maqan yihiin waqti dheer, iyadoo xaalad abaaro iyo colaado ka taagan yihiin.
Sidoo kale, wuxuu Faroole si toos ah uga hadlay xaaladda magaalada Galkacayo oo uu sheegay in lakala xiray isu socodkii dadka iyo ganacsiga, taasina ay ku lug leeyihiin mas’uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland oo dagaal oogeyaal cusub noqday.
Ugu dambeyntii, C/raxmaan Faroole ayaa ka deyriyay qaabka ay u socoto iyo sida loo maamulay doorashada Soomaaliya, taas oo uu ku tilmaamay mid dhalin karta in dalku xaalad halis ah galo.